Yiza nesakho isixhobo > UVielhuber uDavid
Yiza nesakho isixhobo07
Awunakho ukungahoyi ukuba ufuna ukusebenza ngokuguquguqukayo nangokuzimela: ilifu. Kukho inani elininzi labantu esele basebenzise ilifu bengazi. Ngokusasaza, umzekelo, wonke umxholo ugcinwe efini kwaye unokufikeleleka xa kufuneka njalo. INetflix ngumzekelo apha oya usanda ngokwanda eJamani. Okanye ungqamaniso lwee-PC zedesktop okanye iilaptops ezinazo zonke izixhobo eziphathwayo nazo zenziwa ngelifu.
Ikhompyuter yelifu iya isihamba kancinci emhlabeni
Kubomi babo babucala, abantu abaninzi sele bonwabele izibonelelo kunye nenkululeko yelifu. Ukusebenza nelifu kuhamba kancinci kodwa ngokuqinisekileyo ufumana umhlaba kwiinkampani ezincinci. Ababoneleli abaninzi bayaziqhelanisa neemfuno ezintsha zentengiso kwaye baphuhlise iikhonsepthi ezihambelana neemfuno zomthengi. Umgaqo we- Dell BYOD , umzekelo, yindlela elungileyo yokusebenza ngendlela efanelekileyo nelifu. I-BYOD imele ukuzisa esakho isixhobo kwaye ke iyaphantse ichaze.Abasebenzi basebenzisa izixhobo zabo zabucala ukufikelela kwiinkcukacha zenkampani ezigcinwe apho naphina ngelifu.
Kule mihla sele siqhele ukusebenzisa i-tablet okanye ii-smartphone ukufikelela kwi-Intanethi kwaye sijonge ii-imeyile zethu xa sisendleleni. Kwaye uninzi lukhangela ii-imeyile zeshishini ngaphandle kweeyure zabo zokusebenza kwaye, kuxhomekeke kungxamiseko, ziphendule ngokukhawuleza. Umgaqo we-BYOD ngoku uyolulela yonke le nto kwezinye iindawo. Awungekhe ujonge kuphela ii-imeyile zeshishini, kodwa unokufikelela kuzo zonke iifayile kunye nolwazi oluchanekileyo lokusebenza, nokuba uphi.
Ukuguquguquka okugqithisileyo kwilifu
Abaqeshwa ke ngoko bhetyebhetye ngakumbi ngokubhekisele kwindawo yabo yokusebenza nakwiiyure zabo zokusebenza. Kwaye sele zikho izifundo ezingqina ukuba lo mgaqo ukonyusa imveliso kunye nokusebenza kwenkampani kakhulu. Baninzi abantu ngoku abakwaziyo ukusebenza ekhaya. Ukuphelisa uhambo olucaphukisayo ukuya eofisini konga ixesha elininzi kunye nemithambo-luvo kwaye ke oko kudala amandla amatsha kunye namandla onokuthi utyale imali kuwo emsebenzini wakho endaweni yoko.
Ngazo zonke izibonelelo, umntu kufuneka acinge ngokhuseleko. Idatha yenkampani eyimfihlo ngokungqongqo ngoku ikwi-Intanethi kwaye ke ngoku iyafikeleleka kuye wonke umntu onokufikelela kwi-Intanethi. Kukho iindlela zendlela kunye neendlela zokukhusela idatha yakho, ekufuneka yona ibe luxanduva lomboneleli. Apha unokuzikhusela ngamagama abasebenzisi, ipassword kunye neewwallwall. Kwimeko yeenkonzo zefu, idatha ihlala ikhuselekile ngokuqinisekiswa kwezinto ezininzi .
Ukuba uyamthemba kwaye unokuxhomekeka kumboneleli ngenkonzo, kuya kufuneka wamkele izibonelelo ezininzi zekhompyuter yelifu kwaye ufunde ukuzisebenzisa. Kwaye abasebenzi baya kuyamkela ngombulelo inkululeko yabo entsha kunye nokuguquguquka kwaye babuyise ukuthembela kwabo okubabeke ngomsebenzi olungileyo kwaye babe nemveliso ngakumbi kunangaphambili. Ukongeza, iindleko ezisezantsi kakhulu zokufunyanwa kunye nolondolozo ngokuthelekiswa nenkqubo eyahlukileyo yeseva zithetha ngelifu.